Verbs र Adjectives को उपयोग समाचार समाचारहरु को उज्ज्वल गर्न को लागी
पत्रकारिताका विद्यार्थीहरू केवल समाचार लेखनको शिल्पमा सुरू गर्न थाले धेरै धेरै व्याख्यात्मकहरू र धेरै बोरिंग, खुसी verbs, वास्तवमा उनीहरूले विपरीत गर्नु पर्छ। राम्रो लेखन को लागी कुञ्जी स्पेशल एस्पेक्विभ प्रयोग गर्नु हो जब रोचक, असामान्य क्रियाकलाप छनौट गर्ने जुन पाठकहरूले अपेक्षा गर्दैनन्।
निम्न ब्रेकडाउनले एजेप्लेभको प्रभावकारी प्रयोगलाई चित्रण गर्दछ।
लेखन व्यवसायमा एक पुरानो नियम छ - देखाउनुहोस्, नबोल्नुहोस्। व्यभिचारको साथ समस्या यो छ कि उनीहरूले हामीलाई केहि पनि देखाउँदैनन् । अर्को शब्दमा, उनीहरूले कहिलेकाँही भिजुअल छविहरू पाठकहरूको दिमागमा भत्काउन सक्दछन्, र राम्रो र प्रभावकारी विवरण लेख्नका लागि मात्र सजिलो विकल्प हो।
निम्न दुई उदाहरणहरू हेर्नुहोस्:
मानिस मोटो थियो।
मानिसको पेटले आफ्नो बेल्टमाथि फ्याँकिएको छ र उनले आफ्नो माथेमा पसीना पियौं जब तिनले सीढ़ी चढे।
फरक हेर्नुहोस्? पहिलो वाक्य अस्पष्ट र बेग्लै छ। यसले तपाईंको मनमा वास्तवमा तस्वीर सिर्जना गर्दैन।
दोस्रो वाक्य, अर्कोतर्फ, छविहरू केवल केही वर्णनात्मक वाक्यांशहरू मार्फत चित्रण गर्दछ - पेटले बेल्टमा फाँसी, पसीलो माटो। याद गर्नुहोस् कि "वसा" शब्द प्रयोग गरिएन। यो आवश्यक छैन। हामी तस्वीर पाउछौं।
यहाँ दुई थप उदाहरणहरू छन्।
दु: खको डरलाग्दो स्त्रीलाई रोकायो।
महिला कंधो हल्लाए र उनले आफ्नो चिसो आँसुमा कचौरामा लुगा लगाउँदा त्यो कास्केट माथि उभिए।
फेरि, फरक फरक छ। पहिलो वाक्यले थकित विशेषणको प्रयोग गर्दछ - उदास - र के हुन्छ भनेर वर्णन गर्न छोटो छ। दोस्रो वाक्यले दृश्यको चित्रलाई चित्रण गर्छ जुन हामी सजिलै कल्पना गर्न सक्दछौं, विशेष विवरणहरू प्रयोग गर्दै - हल्लाउँदै कंधेहरू, गीला आँखाका पातहरू।
कडा-समाचार कथाहरू अक्सर प्राय वर्णनका लामो स्थान छैन, तर यहाँका केही शब्दहरू पनि पाठकहरूलाई स्थान वा व्यक्तिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
तर विशेषताहरू यी वर्णनत्मक वर्णनहरूको लागि एकदम सही हो।
व्यभिचारको साथ अर्को समस्या यो छ कि तिनीहरूले अनियमित रूपमा रिपोर्टरको पूर्वाग्रह वा भावनाहरू प्रसारण गर्न सक्दछन्। निम्न वाक्य हेर्नुहोस्:
भाग्यशाली प्रदर्शनकारीहरूले भारी-ठूला सरकारी नीतिहरू विरोध गरे।
दुई व्याख्याकहरू - प्लकी र भारी हातले कसरी - कसरी प्रभावकारी पारेको छ कसरी पत्रकारले कथा बारे कस्तो महसुस गर्छ भनेर हेर्नुहोस्। त्यो राय स्तम्भको लागि ठीक छ, तर एक उद्देश्य समाचार कथाको लागि होइन। यदि तपाइँले यस तरिकाका व्याकुलन प्रयोग गरी गल्ती गर्नुभयो भने एक कथाको बारेमा तपाईंको भावनालाई धोका दिने सजिलो छ।
सम्पादकहरू क्रियाकलापको प्रयोग जस्तै उनीहरूले एक्कासी काम गर्छन् र कथालाई गति र गतिको भाव दिन्छ। तर अक्सर प्रायः लेखकहरूले थकित, अचम्मका क्रियाकलापहरू जस्तै यी प्रयोग गर्छन्:
उनले बललाई हिर्काए।
उनले कैंडी खाए।
तिनीहरू पहाडी हिंडे।
हिट, खाए र हिड्यो - बोरिंगिंग! यो बारेमा कसरी
उनले बललाई खेल्यो।
उनले क्यान्सर जिते।
तिनीहरूले पहाडलाई त्रास गरे।
फरक हेर्नुहोस्? असामान्य, off-the-beaten-path verbs को प्रयोग पाठकहरू चकित हुनेछ र तपाईंको वाक्यहरूमा ताजाता थपिनेछ। र तपाईं कुनै पनि पाठकलाई उनीहरूले आशा गर्नुहुने कुनैपनि बेला दिन्छन्, उनीहरुले तपाइँको कथालाई अझ नजिकको पढ्न बाध्य छन्, र यसलाई बढी समाप्त गर्न सम्भव छ।
त्यसैले तपाईंको थेससस बाहिर जानुहोस् र केहि उज्ज्वल, ताजा क्रियाकलापहरू खोज्नुहोस् जुन तपाईंको अर्को कथा चकलेट बनाउनेछ।
ठूलो बिन्दु हो, पत्रकारहरूको रूपमा, हामी पढ्न लेखिरहेका छौं । तपाईं मानिसलाई ज्ञात सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय को कवर गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं यसको बारे मा छोटो लेख्नु भयो भने, बेकारी नर्स, पाठकहरूले तपाइँको कथालाई गुमाउनेछन्। र कुनै आत्म-सम्मानजनक पत्रकारले कहिल्यै गर्न चाहन्छ।
रिपोर्टरको रूपमा सही रूपमा एट्रिब्युसन कसरी प्रयोग गर्ने
ठूला समाचार सुविधाहरूको उत्पादनका लागि सुझाव
आजका पत्रकारहरूले कस्तो सामना गर्छन्?
तपाईंको पत्रकारिता क्यारियर सुरू गर्न तीन उत्तम स्थान
कस्तो फीचर कथा हो सिक्नुहोस्
समाचार खराब मा कामुकता छ?
15 विद्यार्थी पत्रकारिता सुरु गर्न सहायक समाचार लेखन नियम
स्पेस-थीड गरिएको संगीत एक्शन इफेक्शन
BACHMAN उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
इटालियन क्रिया रमिमेरीको लागि कन्जर्जेस टेबल
एक Imbolc हाउस क्लीनिंगिंग अनुष्ठान पकड
नयाँ स्कूल वर्षको तयारी गर्दै
तपाईंको घरको लागि बाहिरी साइडिंग विकल्पहरू
विशेष साक्षात्कार: "जांच अन्वेषण लिस लेन" को लेखक टिम हन्नी
प्रसिद्ध संगीत व्यक्तित्वबाट प्रेम उद्धरण
रसायन विज्ञान र क्यारियर जानकारी
माइन समुद्री एक्टिडेड एडमिशन जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
फ्रेन्च चलचित्र नियमहरू
अर्थव्यवस्था र प्राचीन माया को व्यापार
गिटारको लागि प्रविधि निर्माण अभ्यास
क्रिसमस गतिविधिहरू, कार्यशिष्टहरू, र पाठ योजनाहरू
10 सर्वश्रेष्ठ 'परिवारका केटा' एपिसोडहरू
परिभाषा र अंग्रेजी मा Dysphemisms को उदाहरण
शीर्ष 15 फ्रैंक सिनाट्रा गीत
को उपयोग को लागि प्रिंसियस र सहमति को लागि पैडर्स
तपाईंको कारको पाना अय्यूबको हेरचाह कसरी लिन्छ
प्रभावकारी आवरण पत्र लेख्नका लागि5युक्तिहरू
बिल्ली चित्र: प्यानर
प्लालेन्टाइन कसरी सुरु भयो?
एबी लिंकन र उनको अक्ष: लेजेंन्ड पछि रियलिटी
कसरी व्यवस्थापन र Arborvitae पहिचान
1949ओलम्पिक ट्र्याक र फिल्ड समीक्षा